Waxyaabaha uu dhameystiri doonno hadii Prof. Jawaari xilka markale loo doorto (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Waxyaabaha uu dhameystiri doonno hadii Prof. Jawaari xilka markale loo doorto (AKHRISO)
Guddoomiyihii hore ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa maanta ka mid ah musharixiinta xilkaasi u tartameeysa, iyadoona doorashadaasi maanta lagu wado inay ka dhacdo magaalada Muqdisho.
Musharixiinta haatan sida weyn loo saadaalinayo inay xilkaan ku guuleysan doonaan ayaa waxaa ka mid ah Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo hore guddoomiye uga ahaa baarlamaanka Soomaaliya, wuxuuna hore u ballan qaaday hadii markale xilka loo doorto inuu isbadel aan caadi ahayn soo kordhin doonno.
Prof. Jawaari oo dhawaan kulamo kala duwan la yeeshay xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka codsaday inay dib u doortaan, si uu u dhameystiro arrinta ugu weyn ee qabyada ah.
Arrinta qabyadda ah ayuu Prof. Jawaari ku sheegay inay tahay inuu dhameystirka dastuurka oo weli qabyo ah, wuxuuna tilmaamay in dhameystirka dastuurka ay tahay howsha ugu horeeysa uu doonayo inuu wax ka qabto hadii xilka dib loogu doorto.
Dhinaca kale, Prof. Jawaari ayaa intii uu xilka haayay afartii sano ee lasoo dhaafay wax ka qaban arrinta dastuurka dalka, waxaana uu haaatn arrintaan kusoo beegayaa xilli howsha ugu weyn ee hor-taalo dowladda cusub ee Soomaaliya ay tahay sidii loo dhameystiri lahaa dastuurkaas.
Ugu dambeyntii, Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa codka xildhibaanada cusub kaga doonaya arrintaan uu sheegay inuu xoogga saari doonno dhameystirkeeda, iyadoo baarlamaankii hore uu isaga guddoomiyaha ka ahaa aanay waxba ka qaban arrimaha dhameystirka dastuurka.